Gulf of Finland itholakala empumalanga noLwandle iBaltic. endaweni yaso 29.5 ayizinkulungwane. Km sikwele. Kuyinto enkulu kunazo zonke emva Gulf of Bothnia, endaweni okuyinto ilingana ayizinkulungwane 117,0. Skwele. Kusukela enyakatho, naseningizimu nasempumalanga Gulf elinganiselwe umhlaba yezwekazi it washa zathu yeka ngokulandelana Finland, Estonia neRussia. Kuvele umugqa ngengqondo phakathi Cape Pyyzaspea futhi Hanko inhlonhlo liwumngcele esentshonalanga bay.
Izingu zakhona ezisempumalanga abizwa ngokuthi iNeva lip. Phezulu ke agelezela amagatsha amaningana iNeva. Gulf of Finland Petersburg (bheka isithombe esihlokweni) ingenye izindawo amanzi ebaluleke kakhulu edolobheni. Northern Capital itholakala esempumalanga. Iningi imifula emikhulu ukuthi egeleza insimu ka-Leningrad esifundeni kanye Petersburg ngokwayo, iwe ncamashi kwaba phakathi bay.
Ububanzi isilinganiso Gulf kuyinto 80 km. Kwezinye izindawo, yandisa kuze kufinyelele 130 km (Narva River District). Ubude imayelana 400 km. Gulf of Finland Petersburg ayijulile, ngakho amanzi iyazifudumeza fast ngokwanele. I bamanzi wendawo (eduze iNeva Bay) kwezingu-6 m ukujula Ngokwesilinganiso, kuyilapho we Bay ukujula silinganiselwa 38 m kanye esiphezulu - 121 m.
Le ndawo wamanzi eGulf of Finland igcwele iziqhingi amancane Skerries - inhlonhlo esendaweni encane enamadwala etholakala eduze nogu. Futhi olwandle kuyinto esiqhingini yokufakelwa, okuyinto phambilini obuwaziwa kwamvikela amadolobha asogwini ekuhlaselweni kusukela olwandle.
Gulf of Finland Petersburg cishe insipid. Usawoti liyancipha yamanzi endawo ngenxa confluence ethekwini 20 emifuleni, esiphawuleka kunazo zonke okuyizinto iNeva, futhi Porvonyoki Cale.
Ngasogwini bay, ikakhulukazi enyakatho, kukhona indawo emazombezombe kakhulu, ngalokwanele okusikhumbuza amawa Norwegian. Yomngcele oseningizimu amanzi has kancane kancane endaweni emazombezombe kuka engxenyeni esenyakatho ethekwini.
izinga lokushisa lamanzi esiyisilinganiso bay ubusika 0 ° C, futhi ehlobo-15 ° C. Isimo sezulu esipholile. Zasehlobo Ubusika ezinomswakama kanye okufutshane - made amakhaza emanzi. Lolo hlobo sezulu balindelwe izivakashi abafuna vakashela Petersburg. Gulf of Finland embozwe iqhwa ekupheleni kukaNovemba, kwasivulela maphakathi no-Ephreli. Nokho, ebusika efudumele kule ndawo ingaphinde ibe namanzi amaningi futhi ayigongobali. Ngo May and June kulezi zindawo bangase bazibone buyinto emangalisayo bemvelo - omhlophe nobusuku obungamashumi amane. Ngalesi sikhathi astronomically ( "iwashi") kufika ubusuku, kodwa ukukhanya inakekelwa ezingeni zokuhwelela kwabo ekuqaleni. Abaningi bafisa ukubona uPetru ukubukela lesi sithombe eliyingqayizivele. ebusuku White liqhubeke amahlanu izinsuku.
Gulf ugeza ogwini emazweni amathathu: Russian Federation empumalanga, enyakatho Finland futhi Estonia eningizimu. Kutholwe ogwini inhlokodolobha lamazwe amabili - Estonia (Tallinn) kanye Finland (Helsinki), kanti eyesibili idolobha elinabantu abaningi kakhulu Russian Federation - Saint Petersburg. Kuyinto isikhungo samasiko yeRussia.
Gulf of Finland Petersburg (ngezansi) kuyinto imikhumbi, kodwa endaweni iNeva Bay ayijulile kakhulu. Ukuze izitsha abekwa ngokukhethekile ulwandle isiteshi (isiteshi) ubude cishe 30 km, esukela emlonyeni uMfula iNeva kuya Kotlin Island.
Gulf of Finland nasezindaweni ezizungezile ubhekwa ingxenye ehlathini eningizimu. Lapha, kukhona uphayini, ngesihlahla sonwele namahlathi lezihlahla. Ngenxa waterlogging Gulf nogu uPetru ezungezwe ixhaphozi flora, ukuthi umelwe ngokuyisisekelo bulrush futhi mhlanga ezivamile. Futhi, izitshalo eziningi emanzini sikhule lapha, ezifana iminduze, Potbelly, Carex acuta futhi Valeriana Primorskaya.
nezilwane olubonisa lezi imiphetho futhi lihlaba umxhwele. Phakathi izinyoni ungathola eziningana zama-amadada kanye partridges, goose, grouse Iziqophamithi futhi thrushes, cuckoos futhi tits. Kukhona izilwane ezincelisayo ezincane nezinkulu: kusukela amagundane, izingwejeje futhi beaver ukuba impisi, izingulube kanye nebhere. Gulf of Finland Petersburg uthanda ukuthuthukiswa zokudoba. Into ebaluleke kakhulu izindawo zokudoba izinhlanzi zitholakala esogwini olusenyakatho. EGulf of bukhoma zasolwandle nasemanzini agelezayo inhlanzi, phakathi lapho kukhona ama-cod, sprat, Pike, salmon, umbokwane, whitefish, perch, Pike, bream nabanye.
Gulf of Finland Petersburg: Phumula
Ngenxa ezihlukahlukene, nemvelo agqamile umlando onothileko, endaweni eGulf of Finland ekhangayo ngokuya ezokuvakasha. Entwasahlobo ethekwini ingaphezu ngabe ukwanelisa ngisho umdobi iyakuthanda ukufunda kakhulu: izinhlanzi kusebenza enkulu futhi ezihlukahlukene kakhulu. Summer ilanga futhi abathandi kolwandle, le nqubo inikeza endaweni yamanzi ukusetshenziswa coast yayo. Phakathi nezinyanga zasehlobo, amanzi Gulf kahle evuthayo, kodwa ngenxa yezimo kwemvelo abampofu zarpescheno ebhukuda lapha, kodwa ungakwazi ukugibela isikebhe noma isikebhe. Kukhona okuthile ukwanelisa nezidingo kwamasiko, ngoba ukuya Petersburg, abaningi bafuna, futhi asebeke bahambela lezi zindawo, hhayi nje buya lapha futhi.
Ezibiyele Embankment, eMoscow (isithombe). Indlela ukuya ezibiyele yashayisa unqenqema?
Sibhedlela "Tavria", Yevpatoria: Izibuyekezo nezithombe zezivakashi
Calories: cutlets izinhlanzi. Calorie steamed izinhlanzi amakhekhe
Iresiphi Wonderful aspic Inkukhu nge garlic